5 Tips To Get Pregnant - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အိမျထောငျကပြွီး ကလေးလိုခငျြတဲ့စုံတှဲမြားအနနေဲ့ သိခငျြကွတဲ့အရာတှရှေိပါတယျ။ ဘယျအခြိနျမှာ ဇနီးမောငျနှံတူတူနမေလဲ? အမြိုးသားဘကျက ဘာတှဆေောငျရနျရှောငျရနျရှိမလဲ? ကိုယျဝနျရဖို့ ဘာတှပွေငျဆငျထားဖို့ လိုမလဲ စသဖွငျ့ မေးခှနျးလေးတှရှေိတတျပါတယျ။ ဒါတှကေိုဖွရှေငျးဖို့ အောကျပါ အခကျြငါးခကျြကိုရေးသားလိုကျပါတယျ။
ဆရာဝနျတဈဦးဦးနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးရပါမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးဟာ ကိုယျဝနျဆောငျဖို့ သငျ့တျော၏ မတျော၏ တိုငျပငျဆှေးနှေးလို့ရပါတယျ။ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှပွေုလုပျပွီး ရောဂါဝဒေနာတဈခုခုရှိခဲ့ရငျ လိုအပျသလို ကွိုတငျကုသမှုလညျးခံယူလို့ရအောငျပါ။
(၂) ကနျြးမာတဲ့ကိုယျဝနျဖွဈဖို့ အစီအစဉျဆှဲပါ
မိခငျလောငျးဟာ ကိုယျဝနျစယူဖို့ ဆုံးဖွတျပွီးတာနဲ့ ကလေးမယူခငျအနညျးဆုံးတဈလကွိုပွီး Folic acid ကိုနစေ့ဉျသောကျရပါမယျ။ Folic acid သောကျသုံးခွငျးဟာ မှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြတှေ ပါလာနိုငျတဲ့ရာနှုနျးကို လြှော့ခပြေးပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဆေးလိပျ၊ အရကျ၊ မူးယဈဆေးဝါး စတာတှေ လုံးဝရှောငျကွဉျရပါမယျ။ မိခငျလောငျးမြားဟာ ကနျြးမာတဲ့ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျရအောငျ ထိနျးထားရပါမယျ။ ကျောဖီအလှနျအကြှံသောကျခွငျးရှောငျရပါမယျ။ ကဖိနျးဓာတျကို တဈနကေို့ ၃၀၀ မီလီဂရမျထကျ မပိုသငျ့ပါဘူး။
အမြိုးသမီးမြားဟာ ဓမ်မတာမလာခငျ ဆယျ့လေးရကျပတျခြာလညျမှာ မမြိုးဥကွှလေရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီလို မြိုးဥကွှတေဲ့ရကျတှမှော လိငျဆကျဆံရငျ ကလေးရနိုငျခကြေအမြားဆုံးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရာသီလာတဲ့ရကျ မမှနျတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေတော့ ကြှမျးကငျြတဲ့ပညာရှငျ (သို့မဟုတျ) ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီး မမြိုးဥကွှတေဲ့ရကျကို တှကျခကျြပွီး တူတူနဖေို့အစီအစဉျခသြငျ့ပါတယျ။
(၄) အမှနျကနျဆုံးအခြိနျမှာ လိငျဆကျဆံပါ
မမြိုးဥကွှတေဲ့အခြိနျကို တှကျခကျြပွီးရငျ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ သန်ဓအေအောငျနိုငျဆုံးကာလ (The most fertile window) မှာတူတူနသေငျ့ပါတယျ။ Fertile window ဟာ မမြိုးဥမကွှခေငျ နှဈရကျ သုံးရကျအလိုကနစေပါတယျ။ ဥပမာ နှဈဆယျ့ရှဈရကျနမှေ့ာရာသီလာမယျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ Fertile window ဟာ ၁၂ရကျနကေ့နေ ၁၆ ရကျနပေ့တျဝနျးကငျြထိဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ ကိုယျ့ရဲ့ Fertile window ကိုမသခြောဘူးဆိုရငျတော့ ရာသီလာပွီး ဒုတိယပတျနဲ့ တတိယပတျမှာ နစေ့ဉျ သိျု့မဟုတျ တဈရကျခွား တူတူနပေေးလို့ရပါတယျ။
ကလေးရဖို့အတှကျဆိုရငျ လိငျဆကျဆံတဲ့အခြိနျတငျ အရေးပါတာမဟုတျပါဘူး။ အမြိုးသားရဲ့ သုကျပိုး (Sperm) ကလညျးကနျြးမာသနျစှမျးဖို့လိုပါတယျ။
အရကျသောကျခွငျးကို လြှော့ခရြာမှတဈဆငျ့ ရှောငျကွဉျခွငျး
အလှနျအကြှံဝနပေါက ကိုယျအလေးခြိနျကို သငျ့တျောတဲ့အလေးခြိနျရောကျအောငျ လြှော့ခခြွငျး
Zinc ၊ Folic acid ၊ Vitamin C စသညျ့ ဖွညျ့စှကျအာဟာရဆေးဝါးမြားသောကျသုံးခွငျးကလညျး Sperm ကောငျရကေိုမြားစပွေီး သနျစှမျးစပေါတယျ။
ရပေူထဲရစေိမျခြိုးခွငျးကလညျး sperm တှကေို သတျပဈသလိုဖွဈလို့ ရှောငျသငျ့ပါတယျ။
*အသကျသုံးဆယျ့ငါးနှဈအောကျဖွဈပွီး တဈနှဈကွာတဲ့အထိ ကလေးမရရငျ …
*အသကျသုံးဆယျ့ငါးနှဈအထကျဖွဈပွီး ခွောကျလကွိုးစားတာတောငျ ကလေးမရရငျ…
*အစကတညျးက သငျ့အိမျထောငျဖကျဟာ မြိုးပှားမှုဆိုငျရာ ခြို့ယှငျးခကျြရှိတာ သိပွီးသားဖွဈခဲ့ရငျ…
အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးလိုချင်တဲ့စုံတွဲများအနေနဲ့ သိချင်ကြတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဇနီးမောင်နှံတူတူနေမလဲ? အမျိုးသားဘက်က ဘာတွေဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ရှိမလဲ? ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုမလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အောက်ပါ အချက်ငါးချက်ကိုရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ သင့်တော်၏ မတော်၏ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ရောဂါဝေဒနာတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် လိုအပ်သလို ကြိုတင်ကုသမှုလည်းခံယူလို့ရအောင်ပါ။
(၂) ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲပါ
မိခင်လောင်းဟာ ကိုယ်ဝန်စယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ကလေးမယူခင်အနည်းဆုံးတစ်လကြိုပြီး Folic acid ကိုနေ့စဉ်သောက်ရပါမယ်။ Folic acid သောက်သုံးခြင်းဟာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေ ပါလာနိုင်တဲ့ရာနှုန်းကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး စတာတွေ လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ မိခင်လောင်းများဟာ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရအောင် ထိန်းထားရပါမယ်။ ကော်ဖီအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းရှောင်ရပါမယ်။ ကဖိန်းဓာတ်ကို တစ်နေ့ကို ၃၀၀ မီလီဂရမ်ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးများဟာ ဓမ္မတာမလာခင် ဆယ့်လေးရက်ပတ်ချာလည်မှာ မမျိုးဥကြွေလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မျိုးဥကြွေတဲ့ရက်တွေမှာ လိင်ဆက်ဆံရင် ကလေးရနိုင်ချေကအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီလာတဲ့ရက် မမှန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင် (သို့မဟုတ်) ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး မမျိုးဥကြွေတဲ့ရက်ကို တွက်ချက်ပြီး တူတူနေဖို့အစီအစဉ်ချသင့်ပါတယ်။
(၄) အမှန်ကန်ဆုံးအချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံပါ
မမျိုးဥကြွေတဲ့အချိန်ကို တွက်ချက်ပြီးရင် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ သန္ဓေအအောင်နိုင်ဆုံးကာလ (The most fertile window) မှာတူတူနေသင့်ပါတယ်။ Fertile window ဟာ မမျိုးဥမကြွေခင် နှစ်ရက် သုံးရက်အလိုကနေစပါတယ်။ ဥပမာ နှစ်ဆယ့်ရှစ်ရက်နေ့မှာရာသီလာမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ Fertile window ဟာ ၁၂ရက်နေ့ကနေ ၁၆ ရက်နေ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Fertile window ကိုမသေချာဘူးဆိုရင်တော့ ရာသီလာပြီး ဒုတိယပတ်နဲ့ တတိယပတ်မှာ နေ့စဉ် သို့်မဟုတ် တစ်ရက်ခြား တူတူနေပေးလို့ရပါတယ်။
ကလေးရဖို့အတွက်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တင် အရေးပါတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားရဲ့ သုက်ပိုး (Sperm) ကလည်းကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့လိုပါတယ်။
အရက်သောက်ခြင်းကို လျှော့ချရာမှတစ်ဆင့် ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
အလွန်အကျွံဝနေပါက ကိုယ်အလေးချိန်ကို သင့်တော်တဲ့အလေးချိန်ရောက်အောင် လျှော့ချခြင်း
Zinc ၊ Folic acid ၊ Vitamin C စသည့် ဖြည့်စွက်အာဟာရဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းကလည်း Sperm ကောင်ရေကိုများစေပြီး သန်စွမ်းစေပါတယ်။
ရေပူထဲရေစိမ်ချိုးခြင်းကလည်း sperm တွေကို သတ်ပစ်သလိုဖြစ်လို့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
*အသက်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိ ကလေးမရရင် …
*အသက်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်အထက်ဖြစ်ပြီး ခြောက်လကြိုးစားတာတောင် ကလေးမရရင်…
*အစကတည်းက သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိတာ သိပြီးသားဖြစ်ခဲ့ရင်…